Nin middi ku weeraray dad saarnaa bas, waqooyiga Jarmalka - BBC News Somali
Nin middi ku weeraray dad saarnaa bas, waqooyiga Jarmalka
Image caption Baska oo yaalla waddada dhinaceeda weerarka ka dib
Nin ayaa middi ku weeraray dad saarnaa bas, magaalada ku taalla waqooyiga Jarmalka ee Luebeck, isagoo dhaawacay 14 qof oo 2 ka mid ah ay aad u liitaan,ka hor intii aysan boolisku xirin.
Booliska Schelswig-Holstein ayaa sheegay in cidna aan lagu dilin shilkaas,waxayna xaqiijiyeen in ninkaas ay gacanta ku hayaan. Wax faahfaahin ah ma aysan bixin.
"Qofka falka gaystay waxaa ka awood badiyey oo xiray booliska. Weli waxaan ku sugannahay goobta, halkaa ayaanan xaaladda ka soo tabinaynaa" ayuu boolisku ku qoray Twitter.
Wargayska Leubercker Nachrichten ayaa soo xigtay haweeneyda dacwad oogaha dawladda, Ulla Hingst, oo leh "ma jiraan wax la dhayalsan karo, xataa in ay arrintan argagixiso salka ku hayso".
Waxay wargayska u sheegtay in weerarku dhacay 1.47 wakhtiga waddanka.
Wargaysku wuxuu intaa ku daray in ninka weerarka qaaday uu u muuqday nin da' 30 meeyo jira, waxayna soo xigteen qof goobjooge ah oo leh "mid ka mid ah dadka dhaawacu soo gaaray ayaa qof waayeel ah kursi uga kacay markii uu ninka weerarka qaaday xabadka middi kaga dhuftay".
Booliska ayaa xiray aag ku yaalla xaafadda Kuecknitz ee Luebeck.
Booliska Jarmalka: Ninka dadka laayey xag-jir la yaqaan buu ahaa
Dad lagu laayay weerar ka dhacay dalka Jarmalka
Bishii April ayaa nin gaari waday wuxuu kula dhex dhacay koox dad ah oo fadhiyey makhaayad dibadeeda, magaalada Jarmalka ku taalla ee Muester, halkaasoo uu laba qof ku dilay, ka hor intii uusan toogasho isku dillin.
Ma jirin caddayn la xiriirinaysa mintidnimo, mana uusan ahayn qaxooti.
Magaalada Berlin, ayaa Disembar 2016 nin Tuuniisiya u dhashay oo codsigiisii magangelyada la diiday, xiriirna la lahaa koox mintidiin ah, wuxuu qafaashay gaari xamuul, wuxuuna kula dhex dhacay dad joogay meel suuq ah.
12 qof oo ninkaasi ku jiro ayaa ku dhintay.